ယောက်ျားလေးတွေ SELFIES ယူတဲ့အခါဘာကြောင့်တကယ့်ကိုစိတ်ကသိကအောက်ဖြစ်ရတာလဲ - သတင်း
ယောက်ျားလေးတွေ selfies ယူတဲ့အခါဘာကြောင့်တကယ့်ကိုစိတ်ကသိကအောက်ဖြစ်ရတာလဲ
မိန်းကလေးများစကားပြောကြပြီးကျွန်ုပ်တို့ပြောသောအခါ၊ ကလေးများနှင့်စကားပြောဆိုသောစကားလုံး (cringeworthy ကျော်လွန်) ရှိသည်။ ငါတို့ဘယ်လောက်ကျိုးပဲ့နေတယ်ဆိုတာငါတို့ရဲ့သူငယ်ချင်းကို Elliot ကမိန်းကလေးတစ်ယောက်ရဲ့ဓာတ်ပုံကိုကြိုက်တယ်၊ ဒါမှမဟုတ်ဟယ်ရီဟာမနေ့ညကအိပ်ရာထဲလဲနေတယ်ဆိုတာငါတို့သူငယ်ချင်းကိုပြောနေတာလား။ ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ Tinder နဲ့လိုက်ဖက်တဲ့ကောင်လေးဟာ Instagram မှာနောက်ထပ် selfie တစ်ခုတင်လိုက်ပြီဆိုတာသိလိုက်ရတဲ့အခါကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်လို့ဆိုင်တစ်ဆိုင်လုံးကိုအလိုအလျောက်ပစ်ချင်တာလဲ။
Rhiannon, သတင်းစာပညာ, ပထမနှစ်တွင်
အိုဘုရားသခင်၊ တကယ်လား ဘယ်လောက်ရှက်စရာကောင်းလဲ။ ရုံမကျင့်။
Izzy, ဓါတ်ပုံ၊ ပထမနှစ်
selfies ယူသောကောင်လေးတစ်ယောက်သည်အိမ်တွင်ထိုင်။ သူ၏အုပ်စုပွဲတွင် Zante 2k16 အားသူ၏ယောက်ျားများအားလပ်ရက်တွင်မည်သည့်အရာသည်ပိုမိုလတ်ဆတ်မှုရှိမည်နည်းဟုမေးမြန်းသည်။ သင်၏တစ်ဝက်မျက်နှာ selfies များသည် Tinder အပေါ်အလွန်ကောင်းသည်ကိုကျွန်ုပ်သေချာပါသည်။
လူစီ, မီဒီယာလေ့လာရေး, ဒုတိယနှစ်
အများဆုံးအကြိုက်အတူ instagram ရုပ်ပုံ
သင်ဟာယောက်ျားလေးတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး selfie ရိုက်လျှင်သင်လုံးဝကွဲထွက်သွားစေရန်သင်တောင်းဆိုနေသည်။ ယောက်ျားလေးများနှင့် selfies များသည်စကားမပြောနိုင်သောအဓိပ္ပါယ်မဲ့ Kardashians များနှင့်တူသည်။
အဲလစ်၊ ဖက်ရှင်အထည်အလိပ်၊ ပထမနှစ်
လူသည် 'selfie' ကိုယူနေလျှင်၎င်းသည်သူသည် 13. STOP ဖြစ်ကြောင်းပြသည်။
Selena, မီဒီယာလေ့လာရေး, ပထမနှစ်တွင်
အရမ်းကို! ထို့အပြင်တကယ်femတ္, ကအလုပ်လုပ်သင့်တယ်ဒါပေမယ့်အချို့အကြောင်းပြချက်များအတွက်ရုံဒါရပ်တန့်မပေးပါဘူး!
Lucy ကို, ပုံဥပမာ, ပထမနှစ်တွင်
Selfies ရိုက်သောယောက်ျားလေးသည်သင်၏ပျမ်းမျှလူပျမ်းမျှလိင်တံထက်သိသိသာသာသေးငယ်သောလိင်တံရှိနိုင်သည်။ ရိုးရိုးသားသားပြောရလျှင်ယောက်ျားတစ်ယောက်သည် selfies ရိုက်နေလျှင်သူသည်မင်းကိုကြည့်ခြင်းထက်ဖုန်းကိုအချိန်ပိုပေးသည်။ အန္တရာယ်ရှိသောစီးပွားရေးဖြစ်သည်။
ဘယ်လိုမိန်းကလေးတစ် ဦး ကိုထုတ်စားကြဘူး
လီလီ, ဂရပ်ဖစ်ဒီဇိုင်း, ပထမနှစ်တွင်
ငါ့ကို cringe စေသည်ဒါပေမယ့်သူကအမြိုးသမီးမြားထိုသို့ပြုမှလက်ခံနိုင်ဖွယ်အဖြစ်ရှုမြင်ခြင်းနှင့်ယောက်ျားအဘို့မဖွစျနိုငျအဘယ်ကြောင့်ငါမသေချာဘူး, ငါတို့ ဦး နှောက်အလုပ်လုပ်ပုံကိုဖွင့်ပုံပါဘဲ။
အေမီ၊ စိတ်ကျန်းမာရေးသူနာပြု၊ ပထမနှစ်
ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ, ငါ selfies ယူပြီးယောက်ျားတွေနှင့်မိန်းကလေးများအကြားခြားနားချက်ကိုမမွငျဘူး။ ဒါဟာအားလုံးမျိုးကိုအခြားသူများကိုမကျင့်သော်လည်းအချို့ရုပ်ပုံများကိုသင်တစ် ဦး ပြင် twat တူအောင်လုပ်နိုင်ပါတယ်, ပုံကိုဘယ်လိုယူသလဲဆိုတာပေါ်တွင်မူတည်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ ယောက်ျားတစ်ယောက်သည် 'Tinder အတွက်အသစ်တစ်ခုလိုအပ်တယ်' ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့အိပ်ရာထိုင်ခင်းထဲကို selfie တင်နေသည်ကိုကျွန်ုပ်မြင်တွေ့ခဲ့ရသည်။ အမှန်တကယ်ဘာလဲ။ ရုံ PAL ပါဘူး။
ဤရွေ့ကားအကြွင်းမဲ့အာဏာကလေးများသာယောက်ျားလေးများ selfies ယူသည့်အခါ (လျောက်ပတ်သော) မိန်းကလေးများမခံမရပ်နိုင်သောပြီးသားလူသိများထင်မြင်ချက်အားဖြည့်ပါပြီ။
ဤဆောင်းပါးအတွက်ကျွန်ုပ်တို့တွေ့ဆုံမေးမြန်းခဲ့သောသူများထဲမှတစ်ခုသည်မူလက homophobic တုန့်ပြန်မှုကိုကျွန်ုပ်တို့သတိပြုမိခဲ့သည်။ ဒီဟာကိုဖယ်ရှားလိုက်ပြီ